Zvivakwa zveMadrid zvausingakwanise kupotsa | Absolut Kufamba
Zvivakwa zveMadrid zvausingakwanise kupotsa
Alberto Makumbo | | España, Madrid
Kunyangwe iri zhizha umo vanhu vanosarudza kutyaira kuenda kumahombekombe, Madrid izere nezvirongwa uye, kunyanya, nzvimbo dzekushanyira kuguta guru. Uri kuuya nesu kuzoshanyira zvinotevera Madhorobha eMadrid?
2 El Retiro Paki
4 Gedhi reZuva
6 Alcala Gedhi
8 Cathedral yeLa Almudena
9 Tembere yeDhibhodhi
Inowanikwa mumoyo weMadrid, Plaza Mayor akazvarwa muzana ramakore rechiXNUMX kubva kumusika mukuru iri pakati pemigwagwa yeAtocha neToledo. Mushure mekuendeswa kwedare kuguta, Felipe II akatanga kuvakazve iyo mraba muna 1590 kuvaka chivakwa chekutanga, Imba yeBheka, iyo yekutanga sketch yeiyo icon muBaroque maitiro ayo nhasi ave chimwe cheakakosha zviyeuchidzo muMadrid. Uye zvakare, gore rino Plaza Mayor anovhura hotera yayo yekutanga.
Mapapu makuru eMadrid akavakwa mukutanga kwezana ramakore regumi nemanomwe se nzvimbo yakasvibirira yeBuen Retiro Palace, kunyangwe pakupera kwezana ramakore rechi 118 yakava paki yemuguta yakadaro. Nenharaunda yemahekita zana nemakumi masere nemasere, epaki yeEl Retiro ndiyo inzvimbo yekutamba yemumaguta maunofarira zviitiko zvaro zvakawanda, shanyira zvidhori senge Crystal Palace, yakavakwa panguva yeUniversal Exhibition ya1887; kana kukwira chikepe uchitenderedza Monument kuna Alfonso XII.
Nzvimbo inonyanya kushanyirwa muMadrid Ichowo chimwe chemamuseum akanyanya kukosha muEurope. Inowanikwa mune inonakidza Paseo del Prado, iyo miziyamu inoshanda mu European pendi pakati pezana ramakore rechi XNUMX nerechiXNUMX, inosanganisira mabasa eanoshamisa maartist akadai saGoya, El Greco, Velázquez (naMeninas ake), El Bosco (haugone kupotsa katatu chetatu cheGadheni rePasi Zvinofadza) kana Titian. Sezvimwe nemamwe mamiziyamu ane mukurumbira senge Louvre, Prado yakatanga kusanganisira mabasa akasiyana emadzimambo kusvika pakuvhurwa kwayo kuruzhinji muna 1819.
Chikamu chakakurumbira muMadrid chakagara kubvira 1950 kiromita 0, ichiva moyo wenyika iyo inotenderedza parizvino ngano Tío Pepe chiratidzo, kubatikana kwayo, maartist akazvishandura sevanyori vevana kana kuvapo kwezvifananidzo zvakasarudzika senge zve Bere nemuti wemusitiri. Zita rayo, richibva kuzuva rakashongedza mukova wedare sechikamu chekutarisa kwaro kuLevante, nhasi rinosanganisira Post office iyo shongwe wachi ndiye anotarisira kupa mabhero egore.
Kutenda kwakakurumbira kuSpanish Nhabvu Timu iyo inoda kugeza mukati mayo kupemberera kukunda kwavo, iyo Plaza de Cibeles Iri pakati peCalle Alcalá, Paseo del Prado nePaseo de Recoletos yatove icon yeguta. Yakavakwa sechikamu cheye XNUMXth century dhorobha yekuvandudza chirongwa, tsime rinomutsa mwarikadzi Cybele, inofungidzirwa saamai pasi, nezve ngoro inodhonzwa neshumba mbiri, dzinomiririra vatambi vengano Atalanta naHypogenes, vadikani vaviri vakashurikidzwa naZeus kudhonza ngoro yemwarikadzi nekusingaperi.
Kubva kuCibeles pachayo zvinokwanisika kufungisisa imwe ye masuo ekare ekupinda kuguta reMadrid kune vafambi vanobva kuFrance neAragon. Yakagadziriswa muna 1778 ichitevedzera maitiro eakajairika eRoma ekukunda maberere uye neoclassical chimiro, icho cheAlcalá chakava, zvinoshamisa, akafanotangira mamwe ma icon senge Arc de Triomphe muParis. Chimwe chezviyeuchidzo izvo, zvisingadzivisike, zvinomutsa mauri ndangariro yeimwe rwiyo rwechivanhu.
Inofungidzirwa pekugara zviri pamutemo kwaMambo weSpain kunyangwe hazvo achigara muPalacio de la Zarzuela, Royal Palace iri iyo nzvimbo inogara mizhinji yezviitiko nemhemberero dzehurumende munyika. Inofungidzirwa se imba huru yamambo muWestern Europe Pamusoro peVersailles kana Buckinham pachavo, ichi chivakwa chakarairwa kuti chivakwe naFelipe V muna 1734, Alfonso XIII ari iye wekupedzisira monarch kugara machiri. Kusimbisa yemukati umo iyo mifananidzo naGoya, Velázquez kana Caravaggio sehuchapupu hwekunakisa kwemadzimambo ekare. Pasina kupokana, chimwe chezvivakwa zvakakosha muMadrid.
Cathedral yeLa Almudena
Zvisaririra zvemusikiti wekare zvakashanda seyakanaka kanivhasi yekereke yeLa Almudena yakavakwa pakati pezana ramakore rechiXNUMX nerechiXNUMX akapfuma akasiyana masitaera (kubva kuNeo-Gothic kuenda kuNerromanic) izvo zvinoumba chimwe chezvivakwa zvinonakidza muMadrid. Pakati peParque de las Vistillas neRoyal Palace pachayo, La Almudena ndiyo inonyanya kukosha ye Archdiocese yeMadrid uye akakomborerwa naPapa John Paul II in 1993.
Kunze uye kusatarisika, Tembere yeDebod iri kumadokero kwePaza de España uye inoumbwa neakasiyana ngarava dzakapihwa kuSpain neEgypt muna 1968, gore iro nyika yedu yakabatana mukukumbira kweUnesco kwekuchengetedzwa kwetemberi dzeNubian. Nzvimbo yemashiripiti inokukoka iwe kuti utore mifananidzo yakanakisa, kunyanya panguva yekuvira kwezuva iyo inoshandura zvidimbu zvemuAfrica izvi kuita goridhe kutarisisa nekunwa kana kutora kufamba nemumwe wako.
Mugwagwa wakakurumbira muSpain Inotanga paPuerta de Alcalá uye inopera kuPaza de España ichiratidza zvitoro zvisingaperi, maresitorendi nemitambo kuratidza kufara kwemushanyi chero upi zvake anorasika mumhirizhonga uye zvirevo. Kusimbisa iyo Calla squarekana, inofungidzirwa seyakajairwa Broadway yemimhanzi yayo yakawanda uye mitambo pane bhiri, iyo chinzvimbo cheCírculo de Bellas Artes kana hongu, kunyangwe hombe Primark.
Izvi zviyeuchidzo zveMadrid izvo iwe zvausingakwanise kupotsa zvinomutsa runako rweguta uko zororo, tsika uye gastronomy sarudzo zvinowedzeredzwa nenhoroondo dzekare inofanirwa kushanya kamwe chete muhupenyu hwako.
Ehe, usakanganwe kuita yekumanikidza yekumira kuravira yakanakisa squid sangweji muPaza Meya.
Ndeapi matanho aunofarira muMadrid?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » Zvivakwa zveMadrid zvausingakwanise kupotsa
Chii chekuona nekuita paMontparnasse tower muParis